Ụlọ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Anyị na-etinye akwa na griin haus n'ụzọ ziri ezi: ebe, obosara, elu, foto
Nkwadebe akwa na griin haus, usoro nke choro ihe puru iche. Ịga nke ọma na akwụkwọ nri ndị na-eto eto na-adabere n'ọnọdụ na ebe ha kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ya mere ajụjụ gbasara ụzọ isi mee ka akwa dị na griin ha bụ ihe gbasara ọtụtụ ndị na-elekọta ubi. Ihe ndina dị na griin ha dị na ihe ndị dị na mkpụrụedemede. A ga-atụle ihe ndina ndị ahụ na griin ga-adị na nhazi nke ntinye ya.
Anyị na-ewu ọba iji nye aka aka ngwa ngwa na ego
N'ezie, na-enweghị ọba na nkata dị nnọọ nhịahụ. Otu ogige ubi a na-agbanye. Mkpụrụ. Ebibi. Eke. Wheelbarrow Ee, ọtụtụ ihe. Iji ghara ịdọrọ ụlọ ahụ dum, e nwere nkedo. N'ezie, ịnwere ike ịnye ndị na-ewu ụlọ ụgwọ, ha ga-emekwara gị ihe niile. Mana ọ ga-ekwe omume na ị ga-eji aka gị mee ọba, ọ bụrụ na ị maara otú ntu ahụ dị iche na nkedo ahụ.
Jiri aka aka wue ulo okpuru ulo
Ụlọ okpuru ulo bụ ụlọ nchekwa maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ngwaahịa dị iche iche na ihe oriri. N'ihi ogo iru mmiri na ebe nchekwa okpomọkụ a na-akwado, okpuru ulo na-eje ozi dịka "onye nju oyi" maka ngwaahịa, ma na-enye gị ohere ịchekwa ya ruo ogologo oge. Okpokoro okpuru dị mkpa mgbe niile na ụlọ ndị dị na obodo na ụlọ obibi.
Ntọala maka griin haus aka aka ha: ụdị, aro, foto
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, na-eme mkpebi iji wuo griin ha na saịtị ahụ, echela banyere ntọala nke pụrụ ịdabere na ya. N'ezie, ụlọ griin ha abụghị isi ụlọ ọrụ na ibu dị na ala sitere na ya bụ obere. Ya mere, ọtụtụ ndị kwenyere na ọ dị mkpa maka ntọala a pụrụ ịdabere na ya nanị maka ụlọ ndị isi obodo, na a pụrụ ịkụnye griin ha nkịtị na ala.
Ajuju onye si na ahihia n'ubi na ubi nke ala nna anyi enweghi ike izute ya. Ọ bụ ihe scarecrow! Ihicha dị egwu nke ọtụtụ narị afọ chebere ihe ọkụkụ ahụ site na ọnwụ. Ugbu a chefuola, na n'efu. Ikekwe, scarecrow abaghịzi uru dịka onye nchebe site na obere anụmanụ ma ọ bụ nnụnụ. Otú ọ dị, e nweghị kagbuo ihe ngwọta ahụ.
Osisi anyị bụ anụ ụlọ anyị, mana anyị anaghị enwe ike ịnọnyere ha n'oge elekere. Ọ bụrụ na ị maara nsogbu a, ṅaa ntị na ịgha mkpụrụ ubi na ubi akwukwo nri - nke a agaghị azọpụta gị site na nleta kwa ụbọchị na ụlọ, ma na-azọpụta gị ego. Echela na "akpaka" na-agụnye ụfọdụ ngwaọrụ ọjọọ, nke, ọzọ, ga-eri ezigbo ego penny.
Ịwa ịsa mmiri na-eme-ya-onwe gị - nkasi obi na ọhụrụ ọhụụ
Ezigbo ụlọ na-enye ọnọdụ dị mma, ma ọ bụ naanị ezumike zuru ezu site na njedebe nke ndụ obodo na nkata nke ọdịdị. Onye na-eme ngwa ngwa ma ọ bụ emesịa dị ka ịnọ naanị ya na oké ọhịa, osimiri, anụmanụ, igwe, anyanwụ dị ka o kwere mee. Ọ na-enye ya udo na mmetụta dị ukwuu. Ugbu a laghachi "site n'eluigwe ruo ụwa."
Ndị na-azụ anụ ugbua na-eme ya n'onwe gị site na ihe mkpofu
Maka ịzụ ụmụ nnụnụ, ị nwere ike ịmepụta nri ma ọ bụ tee nri dị iche iche. Ọtụtụ mgbe, a na-eji karama plastik, kaadiboodu ma ọ bụ plywood mee ihe maka ndị na-azụ anụ. Egbukwasịrị ọkpụkpụ ahụ n'elu osisi ma ọ bụ osisi, a pụkwara ịdakwasị ya n'elu mgbidi ụlọ.
Iche iche na atụmatụ nke iwu nke gazebos inye aka aka ha
Enweghị ike ịchọta ebe a dị n'èzí nke oge a n'enweghị ebe dị mma, ebe ị nwere ike ịṅụ tii na-esi ísì ụtọ, soro ndị enyi gị ma ọ bụ na-eku ume ọhụrụ mgbe ị na-anụ ụtọ ọdịdị. Ọ dabere n'otú arbor ga-esi ele anya, ogo izu ike dabere. Ogologo oge okpomọkụ Ọ bụ oge okpomọkụ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa dị oké mkpa na ibé ala ụlọ.
Eji aka aka ha rụọ ụlọ mposi osisi na mba ahụ
Mgbe ị na-ahazi mpaghara mpaghara, ị ghaghị ime, nke mbụ, nkesa ókèala ya n'okpuru ihe ndị dị mkpa ma chọọ nlebara anya nke ụlọ ahụ. Ndị a gụnyere ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ ụlọ mposi. Na-enweghị ya, ọnụnọ ahụ ga-adị ka nsogbu dịka ụlọ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. A ghaghị ịrụ ụlọ mposi dịka ihe eji edozi ahụ akọwapụtara na akwụkwọ iwu.
Mwube na-ewuzi mkpụrụ vaịn na-eme ya n'onwe gị
Na-ekpebisi ike itinye aka na mkpụrụ vaịn, a ghaghị iburu n'uche na osisi a dịka njikọ, na-enweghị ọdịdị ụfọdụ, ya mere ọ chọrọ nkwado. N'afọ abụọ gara aga mgbe ị kụrụ bushes nke mkpụrụ vaịn chọrọ nkwado oge - stakes. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, ọ dị mkpa iji kwalite nkwado na-adịgide adịgide.
Home smokehouse mee ya n'onwe gị
Ụlọ ma ọ bụ ụlọ bụ ihe kachasị mma maka ịhazi obere ọkụ ọkụ gị, na-ekwe ka oge ọ bụla rie anụ a na-ata anwụrụ, anụ ezi, anụ ọkụkọ ma ọ bụ azụ. Ihe owuwu nke ụlọ anwụrụ ọkụ ahụ agaghị achọ ego ị na-akwụ ma ọ bụ ihe ọmụma miri emi nke na-ewu, ihe ga-esi na ya pụta karịa ihe niile ị na-atụ anya ya, n'ihi na ọ dịghị otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma nke a pụrụ iji tụnyere nri e ji eme ụlọ nke aka gị ji aka.
Nkà na ụzụ nke ịmepụta ihe mkpuchi nke polycarbonate na-eme ya n'onwe gị
Ụlọ mgbochi bụ ụdị ụlọ elu nke e mere iji chebe onwe ya pụọ ​​n'ụdị ọdịda niile. Ná mmalite, e wuru ihe owuwu dị otú ahụ n'obodo nta. Obere oge ka e mesịrị, awning malitere iji wuo ya na mmiri ozuzo na ala na ahịa. Site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, narị afọ na narị afọ gara aga, emeela ka eziokwu ahụ dị na mbara igwe dị iche iche.
Teknụzụ nke ịmepụta ogige ubi iji nye aka aka ha
A na-ewere bench na saịtị ọ bụla mma. Onye ọ bụla nwe obodo ga-achọta ebe maka ihe dị otú a, ma ọ bụ ụlọ, ụlọ, ụlọ ezumike, ma ọ bụ ubi na ubi na ogige. N'ezie, ugbu a, ọtụtụ ngwaahịa ndị a dị n'ahịa, mana ọ ka mma ịkwado ndụ gị n'onwe gị.
Ụzọ ugbo. Eme-ya-onwe gị imepụta ihe
Ụzọ ugbo abughi nani ugbua nke na-enye gi ohere igaghari n'ubi. Ọ na-eburu ọ bụghị naanị ibu ọrụ, kamakwa bụ ihe mmemme nke mma gị na saịtị. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ka ọdịdị ha dabara n'ozuzu ya.
Akwa ọzọ na-efu ụlọ griin ha: Obere-griin haus
Aha ahụ n'onwe ya na-ekwu banyere obere nhazi nke usoro a. N'agbanyeghị oke dị iche iche site na griin ga-edozi, ụmụaka dị otú ahụ nwere ike ichebe osisi ahụ site na mmetụta ọjọọ nke gburugburu ebe obibi. A na-ewere obere ụlọ griin dị ka obere nhazi. Ụlọ ọrụ dị otú ahụ enweela ọkwá dị mma n'ihi nrụsara nke nrụnye, ịdị jụụ, na ọnụ ọnụ ọnụahịa.
Niile ọchị banyere ubi polycarbonate greenhouses
N'adịghị ka griin haus, nke anyanwụ na-ekpo ọkụ, a na-enye griin ga-eme ka polycarbonate nwee isi iyi nke okpomọkụ (dịka ọmụmaatụ, stovu ma ọ bụ ahịhịa nke pereperevayuschey foliage). Ọnọdụ okpomọkụ na-emepụta mgbe nile na griin haus na-enye osisi ndị nwere oge dị mma maka oge na-eto eto na ịmị mkpụrụ. Nkọwa nke dị oke ọnụ, nke dị ogologo, ọtụtụ agba. Ka ị ghara ịla n'iyi ike iji kpoo nnukwu ụlọ, a na-eme ka ụlọ akwụkwọ greenhouses dị ntakịrị.
Lightweight, kọmpat ma inogide griin haus "Agronom"
N'iji usoro ihe ntanetiri "Agronom" nwere ike nyochaa otu n'ime ihe kacha mma kachasị mma maka ịrụ ọrụ na ịdị mfe nke ịrụ ọrụ, nakwa dị mfe na ịdabere na nhazi ahụ. Ihe ndị a na-eji ihe ndị dị n'oge a akọwa ọdịiche dị na akara nke greenhouses na-enye ohere iji nweta ezigbo nsonaazụ mgbe ị na-eto eto na ala.
Ezigbo owuwe ihe ubi n'oge owuwe ihe ubi na obere-griin haus
Ndị ọkachamara ahụmahụ maara na ndị toro eto n'okporo ámá dị ike karịa osisi ndị dị n'ime ụlọ. Ná mmalite nke ụbọchị mbụ ọkụ, ọ dị mma iji iwepu mkpụrụ osisi nke akwukwo nri a kụrụ site na ụlọ ahụ ka o wee bụrụ nke dị n'èzí. Iji chebe ya n'oge a, a na-eji nnukwu greenhouses na obere-greenhouses mee ihe.
Nri owuwe ihe ubi na griin haus "Kabachok" polycarbonate
A na - eji Greenhouse a na - akpọ "Zucchini" maka obere osisi. Ndị a gụnyere eyịm, tomato, zucchini na ọtụtụ ndị ọzọ. Ngwaọrụ ndị a dị mfe ịgbakọta, ịkwesighidị ịchọ ihe ndị ọzọ maka nrụnye. Nkà na ụzụ Njirimara nke etiti bụ profaịlụ metal. Akụkụ ya dị 25x25 mm.